नेपाल आज | दीपकराज गिरी र केशव स्थापित पक्राउ पर्लान ?
काठमाडौँ । गीतमा शाब्दिक विवादपछि गायक दुर्गेश थापा मंगलबार बालाजुबाट पक्राउ परे । तिहारको छेको पारेर सार्वजनिक भएको ह्याप्पी तिहार चिसो बियर बोलको गीतमा प्रयोग भएका शब्दका कारण विवादमा तानिएका उनलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सहकुल थापाले जानकारी दिए ।
दुर्गेश पक्राउबारे थापाले नेपाल आजसँग भने –‘देउसी भैलोको गीतमा देशले प्रतिबन्ध लगाएको गाँजा खाऊँ, बियर खाऊँ भनेकाले पक्राउ गरिएको हो ।’ दुर्गेशको गीतका शब्दलाई लिएर अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले उजुरी गरेका थिए ।
दीपकराज पनि पर्लान् ?
केही अघि अभिनेता दीपकराज गिरीले प्राइम टेलिभिजनसँग आफू ‘गाँजाप्रेमी’ रहेको खुलासा नै गरे । आफू गाँजाप्रेमी भएको र गाँजालाई नेपालमा खुला रूपमा बेच्न पाउनुपर्ने धारणा मात्र राखेनन् आफूले गाँजा नखाएको १६ दिन पुगेको बताए ।
कार्यक्रम प्रस्तोता प्रकाश सुवेदीले गिरीलाई ‘तपाईंलाई गाँजाप्रेमी भन्छन् नि हो ?’ भन्दा गिरीले भने – ‘मेरो मुखमा गाँजा नपरेको १६ दिन भयो,’ फिल्मको काम गर्दा गाँजा खाने गरेको र अब अर्को फिल्मको काम गर्दा पनि गाँजा खाएरै गर्ने उनको भनाइ राखे ।
गिरीले आफूमा देखिएका कतिपय रोग पनि गाँजाले निको बनाएको भन्दै गाँजा, चुरोट तथा मदिराभन्दा राम्रो भएको आशय दिए । उनले यस्तो अभिब्यक्तिबारे सामाजिक सञ्जालमा अनेकन टिकाटिप्पणी भएको थियो ।
दुर्गेश थापा पक्राउबारे प्रहरीले गाँजा कानूननः प्रतिबन्धित भएकाले त्यसलाई खानुपर्छ भनेकाले पक्राउ परेको स्पष्ट पारेको छ । तर अभिनेता गिरीले अन्तर्वार्ता नै दिए नि त । के उनी पनि पक्राउ पर्छन भन्ने नेपाल आजको प्रश्नमा एसएसपी थापाले भने –‘त्यसबारे अहिलेसम्म उजुरी परेको छैन । आए प्रहरीले एक्सन लिन्छ । ’
यता दीपकराजले भने आफूले गाँजा खानुपर्छ भन्ने अडानमा आफू अझैपनि अडिग रहेको बताए । तपाईँलाई चाहिँ पक्राउ गर्नु पर्दैन् भन्ने नेपाल आजको प्रश्नमा गिरीले आफूले छाडिसकेको बताए । उनले भने –‘मैँले त्यो अन्तर्वार्तामा भनेको हुँ । गाँजा लिगलाईज गर्नुपर्छ । यो औषधीका लागि प्रयोग हुन्छ । तर लिमिटमा खानुपर्छ । अन्यथा दुव्र्यसनाप पर्ने सम्भावना हुन्छ ।’ अब तपाईलाई पनि त पक्राउ गर्नुपर्ला नि होइन ? उनले आफूले छाडिसकेको भनेकाले सम्भावना नभएको बताए ।
गाँजाबारे चर्चित सेलीब्रेटीदेखि राजनीतिज्ञले पनि सार्वजनिक भाषणबाजी गरेका छन् । पूर्व मन्त्री केशव स्थापितले त गाँजा शरीरका लागि निकै मह्वपूर्ण रहेकाे भनेर सार्वजनिक अभिब्यक्ति नै दिएका छन् । उनले गाँजा कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । हेर्नुहोस् भिडियो :
स्पष्टै छ नेता अभिनेताका शैली सिप सामान्य व्यक्तिहरुले पछ्याउँछन् । अभिनेता दीपकराज पूर्वमन्त्री केशव स्थापित लगायतले गाँजा जरुरी छ खानुपर्छ भन्ने आशयको सार्वजनिक भाषणबाजी, अन्तर्वाता दिनेहरु पक्राउ पर्लान् ? प्रश्न उब्जिएको छ भने अर्काेतर्फ जे भएपनि स्रष्टा कलाकारहरु पक्राउ गर्न नहुने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आवाज उठन थालेको छ ।
गायक दुर्गेशले गीतसमेत हटाइसकेकाले पक्राउ गर्न उपर्युक्त नहुने तथा दीपकराजले औषधीका रुपमा मात्र इच्छा हुनेले खाँदा हुन्छ भनेकाले यसैलाई ठूलो इस्यु बनाउन नहुने एक अधिकारकर्मीले बताए ।
एसएसपी थापासँग प्रतिक्रिया लिएसँगै हामीले दीपकराज गिरीसँग प्रतिक्रिया लिएका थियौँ । हेरौँ उनको भनाइ :